नियमित महिनावारीका लागि आवश्यक छ यस्तो खानपान « Janata Times
नियमित महिनावारीका लागि आवश्यक छ यस्तो खानपान
महिनावरी किन गडबडी हुन्छ ? यसबारे महिलाहरु वेखबर हुन्छन् । हुनपनि महिनावरी गडबडी हुनुको कारण एकमात्र छैन । अनेक कारणले यस्तो समस्या हुने गर्छ । शहरिया वा चिकित्सकको पहुँचमा भएका महिलाहरु त आवश्यक परामर्श र परीक्षणका लागि अस्पताल धाउन सक्छन् । तर, ग्रामिण क्षेत्रका अझ दूर-दराजका महिलाहरु भने भित्रभित्रै यो पीडा गुम्साएर बस्ने गर्छन् ।
महिनावरी किन गडबडी हुन्छ त ?
भनिन्छ, सही किसिमको खानपानले पनि महिनावरी गडबडीको जोखिम हुँदैन । अर्थात महिनावरी नियमित गराउनका लागि कतिपय खानेकुरा उपयोगी हुनेगर्छ । यसै सन्दर्भमा विविसी हिन्दी अनलाइनले प्रतुत गरेको लेख यहाँ सान्दर्भिक छ ।
महिनावरी गडवडीमा खानपान जिम्मेवार
महिलाको शरीरमा हर्मोनल गडबडी हुनुमा खानपानको प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहने गरेको एक अध्ययनले जनाएको छ । उक्त अध्ययन अनुसार जो महिला खानामा कार्वोहाइडे्रटस्को सेवन धेरै गर्छन्, उनीहरुमा महिनावारी समय अगावै सुरु हुने सम्भावना उच्च हुने गर्छ ।
विशेषगरी, पास्ता तथा चामल अधिक सेवन गर्ने महिलामा महिनावारीको समस्या एक डेढ वर्ष पहिले नै सुरु हुने गर्दछ ।